Waa maxay lafo-xanuunku? | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 03/12/2021 23:49 | Tababar
Waa maxay lafo-xanuunku? Waxaa jira xirfadlayaal kala duwan oo ka shaqeeya dhinaca caafimaadka. Oo lafo-xanuunku waa mid ka mid ah. Diiwaangelinta Osteopaths ee Spain waxay ka kooban tahay xirfadlayaal buuxiya shuruudaha lagama maarmaanka ah si ay u horumariyaan shaqadooda goobtan. Waa in la tilmaamaa inay tahay urur aan faa'iido doon ahayn. Dhankeeda. Xiriirka Osteopaths ee Spain wuxuu isu keenaa xirfadlayaal kala duwan oo takhasus leh hamigan. Xubnuhu waxay buuxinayaan shuruudaha uu tilmaamay EFO (Ururka Yurub ee Ostheopaths).
Xirfadle caafimaad kastaa wuxuu fuliyaa nidaam gaar ah si loo ogaado cudurka. Magacaabida waxay fure u tahay ku talinaynta daaweyn wax ku ool ah. Waa maxay qalabka shaqada ee ugu weyn ee astaanta la tilmaamay? Gacmaha
1 Lafo-jileecu waxay u baartaa jirka unug ahaan
2 Farqiga u dhexeeya dhakhtarka lafaha iyo daaweeyaha jireed
3 Halka laga qaato koorsooyin khaas ah oo ku saabsan lafo-jileeca
Lafo-jileecu waxay u baartaa jirka unug ahaan
Waa in la ogaadaa in osteopathy uu yahay edbin ka mid ah qaybta daawada aan caadiga ahayn. Jidhku waxa uu helaa aragti guud maadaama uu jiro xidhiidh ka dhexeeya shay kasta oo qayb ka ah guud ahaan. Marka la soo koobo, aragtida caalamiga ah ee jidhka bini'aadamka waxay ka bilaabataa mabda'a lagama maarmaanka ah ee ku dhex jira qaabka edbintan: jirka waxaa loo arkaa unug ahaan. Unug, oo dhinaca kale ah, ayaa sidoo kale la xidhiidha diyaaradda dareenka. Sidan, raaxo la'aanta jidhka qaarkood ayaa laga yaabaa inay asal ahaan ka soo jeedaan dhinac ka mid ah xaaladda maskaxda.
Tusaale ahaan, xanuunka jidhka waxaa sababi kara walbahaarka urursan ee qaabka kacsanaanta muddo dheer. Iyadoo loo marayo habka wehelnimada, jidhku wuxuu dib u helayaa dheellitirnaantiisa (sida lagu muujiyey osteopathy). Silica shucuureed waxay ku reebi kartaa raadkeeda raaxo la'aanta jirka. Iyada oo la adeegsanayo edbintan, suurtogalnimada ayaa soo baxaysa in lagu dhex galo cilladaha dhaqdhaqaaqa ee suurtogalka ah. Sidaa darteed, iyada oo loo marayo daaweyn wax ku ool ah, waxay hagaajiyaan dhaqdhaqaaqa.
Farqiga u dhexeeya dhakhtarka lafaha iyo daaweeyaha jireed
Xirfadlaha ka shaqeeya qaybta lafo-jileecu wuxuu u gudbiyaa bukaanka khabiir ku takhasusay goob kale marka uusan u qalmin inuu ka qaybgalo kiiskiisa. Waa in la tilmaamaa inuu jiro farqi muhiim ah oo u dhexeeya lafo-xanuunka iyo daaweeyaha jimicsiga. Kan dambe waxa uu dhammaystay shahaado jaamacadeed. Intaa oo dhan waxa uu isu diyaariyey sidii uu u horumarin lahaa xirfadiisa. Tani waa sababta bukaanno badani door bidaan inay la tashadaan kiiskooda khabiir leh xirfado, karti iyo aqoon ay taageerto shahaado rasmi ah oo la aqoonsan yahay.
Waqtigan xaadirka ah, ma jirto shahaado gaar ah oo lafaha lafaha si aad u noqoto khabiir ku takhasusay laantan. Waxa loo soo bandhigay sidii daawayn kale. Shaqsiyaadka ka shaqeeya arrimahan ee daawooyinka aan caadiga ahayn waa kuwa xirfadlayaasha ah ee dhameystay daraasado caafimaad oo ay ku dhameysteen diyaarintooda koorasyo ​​ama shahaadada Masterka. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah daaweeyayaasha jireed ee khibrada leh ayaa cusbooneysiiya tababarkooda si ay u bixiyaan adeegyada goobta lafaha sidoo kale.
Halka laga qaato koorsooyin khaas ah oo ku saabsan lafo-jileeca
Badanaa, jirradu waxay isku muujisaa astaamo iyo calaamado xaaladeeya tayada nolosha qofka ay saamaysay. Si kastaba ha noqotee, marka laga eego aragtida osteopathy, waa in la ogaadaa in daaweyntu ay ku shaqeyso sababta. Sababta la sheegay waa mid la xiriirta xanuunka uu keeno.
Dugsiga Jaamacadda ee Osteopathy ee Jaamacadda Murcia waxay bixisaa tababar wax ku ool ah. Waxay bixisaa buug koorasyo ​​ah oo kor u qaadaya tababarka joogtada ah. Ma doonaysaa inaad ku takhasusto qaybtan si aad u kobciso xirfadaada dhankaas? Waxa jira xarumo tababar oo kale oo ku raaci kara waxbarashadaada. Dugsiga Madrid ee Osteopathy waa xarun kale oo tixraac ah. Bixinteeda tababbarka waxaa loogu talagalay ardayda ka qalinjabisay Jimicsiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Tababar » Waa maxay lafo-xanuunku?
Waa maxay nidaamka guud ee maamul?